ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: ပါမစ်ပြန်ပေးမည့်ရက် ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ တွင်စတင်တော့မည်
ပါမစ်ပြန်ပေးမည့်ရက် ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ တွင်စတင်တော့မည်
အားလုံး မေးနေတဲ့မေးခွန်းတစ်ခု လဲဖြစ် ၊ မလေးရှားရောက် မြန်မာအိုဗာစတေးသမားများအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုလဲဖြစ်တဲ့ OPS 6P ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဒုတိယအကြိမ် Legalization အစီအစဉ်ကို ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ မှာ မလေးရှားနိုင်ငံ ပူထရာဂျာရာ ရှိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရုံး ၄ လွှာမှာ လာမည့် ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ (တင်္နလာနေ့) မှာစတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားရှိ အာဏာပိုင်များမှ တရားဝင်ကြော်ငြာသွားခဲ့သည် ။
အစီအစဉ်အရ တရားမဝင် အလုပ်သမားများ ဖြင့်လည်ပတ်နေသော အလုပ်ရှင်များ နှင့် 6P အေးဂျင်းများ ထံငွေသွင်းပြီး ပါမစ်မရရှိခဲ့သော သူများအားလုံး ကိုချက်ချင်းပါမစ်ရရှိအောင် စီစဉ်ပေးသွားမည်ဟု ကြော်ငြာသွားခဲ့သည် ။
ကြာလူ ၊ အေးဂျင်းနှင့် မည်သည့် ကုမဏီကိုမှ ကြားနေဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းလဲထည့်သွင်းရေးသားထားသည် ။
သို့ကြောင့် 6P တွင် ငွေပေးပြီး ပါမစ်မရရှိသော သူများအားလုံး မိမိတို့ အလုပ်ရှင်သူဌေးများကို ခေါ်ယူကာ ၊ အောက်ပါ အချက်လက်များဖြင့် တရားဝင်သွားရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည် ။
၁.6P ကာလအတွင် အေးဂျင်းများသို့ငွေပေးထားသော အထောက်အထား ။
၂. 6P ကာလအတွင်း လဝကမှ ရရှိထားသော အထောက်အထားအပြည့်အစုံ ။
၃. 6P ကာလအတွင်း မိမိတို့ဆောင်ရွက်ထားသော အေးဂျင်းအထောက်အထား ။
၄. မိမိတို့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသာ အလုပ်ရှင် ။
စသည့် အချက်အလက် ၄ ချက်ပြည့်စုံစွာရှာဖွေ၍
အလုပ်သမား ၊ အလုပ်ရှင် ၂ ဦးလုံး အတူတကွသွားရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည် ။
Myanmar Passport Information
ထို 6P စီမံချက်အတွင်း ပါမစ်မရရှိသော သူများအနေဖြင့် မိမိတို့လက်ထဲတွင် Passport စာအုပ်ရှိပါက ထိုစာအုပ်ဖြင့် ပါမစ်ရရှိရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ။
ပတ်စပို့မရှိတော့ပါက လဝက မှ ပေးမည့် အထောက်အထားများဖြင့် မြန်မာသံရုံးတွင် Passport စာအုပ်ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည် ။
ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် ယခင် 6P အစီအစဉ်အတိုင်း မိမိတို့ ၏ မြန်မာပြည်စာရွက်စာတမ်းများအနေဖြင့်
1. မှတ်ပုံတင် မူရင်း - မိတ္တူ
2. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ
မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်ထား ခိုင်လုံစွာတင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည် ။
ယခု အစီအစဉ်အား ကာလအားဖြင့် ၃ လတိတိဆောင်ရွက်ပေးမည်ကြောင်း မလေးရှား အာဏာပိုင်များမှကြော်ငြာထားသည် ။
ပါမစ်မရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် မိမိတို့ ယခင်ဆောင်ရွက်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် သူဌေးနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည် ။
ယခု ပါမစ်ထုတ်ပေးမည့်အစီအစဉ်တွင် အေးဂျင်း ၊အလယ်လူ ၊ Man Power ကုမ္မဏီ မည်သည့် သူကိုမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးထားကြောင်း ကြော်ငြာထားသည့်အပြင် ။ 6P တွင်ပါမစ်လျှောက်ထာခြင်းမရှိသော မည်သည့်သူကိုမျှ ပါမစ်ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း NTV7 တွင် မနေ့ညက ထပ်မံကြော်ငြာသွားခဲ့သည် ။
သို့ကြောင့် ပါမစ်လျှောက်ထားမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် မိမိတို့ သူဌေးများဖြင့် အထူးညှိနှိုင်းကာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပေးသည်။
ဆက်လက်ပြီး ထူးခြားသော အစီအစဉ်များ ၊ ကြော်ငြာချက်များရှိပါက ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမည် ။